RW Kuxigeenka Dalka Oo Kahadlay Horumarka Deegaanka Soomaalida - Cakaara News
RW Kuxigeenka Dalka Oo Kahadlay Horumarka Deegaanka Soomaalida
Samara ( Cakaaranews ) jamce, 11ka march 2016. Waxaa caawa xarunta dawlada deegaanka canfarta ee samara lagu soo gabagabeeyay shirkii qiimaynta waxqabadka 6da bilood ee boordhiga dawlad deegaanada taageerada horumarka gaarka ah lasiiyo oo uu gudoomiye kayahay rasial wasaare kuxigeenka JDFI mudane Dhamaqe Mokenin.
Hadaba gabagabadii qiimaynta warbixinada deegaanada kadib ayuu raisal wasaare kuxigeenku usoo dhigay guriga su’aal ah ‘‘maxaa sabab u ah baad u malaynaysaan horumarka laxaadka leh ee uu gaadhay deegaanka soomaalidu?
RW kuxigeenka ayaa islamarkiiba kujawaabay, siday ila tahay‘‘ waa hogaaminta oo kago’naansho leh iyo shacabka deegaanka oo iskaashanaya, iyo waliba hogaaminta oo diyaar u ah inay kafaaiidaystaan taageerada gaarka ah ee xukuumada dhexe iyadoo warbixinta deegaanku soo jeediyay ay tahay mid aan indhahanaga kusoo aragnay iyo mid aan muuqaal toos ah kudaawanay labadaba’’
Mudane Dhamaqe Mokenin raisal wasaare kuxigeenka JDFI ayaa intaa raaciyey in DDSI laga baran karo geesinimada ay kuwajaheen horumarka, nabadgelyada, maamulka suuban iyo xidhiidhka dadwaynaha. Wuxuuna sheegay in hogaaminta deegaanku ay kusifoobeen dabeecada risk takernimada ah ee kamidho dhalinta hogaaminta u ah lafdhabarta. RW kuxigeenka ayaa carabka kudhuftay in deegaanka soomaalida laga baran karo:
isbadalka uu kakeenay dhanka biyaha oo ay mudnaanta 1aad, 2aad iyo 3aadba siiyeen gaar ahaan ceelasha dhaadheer iyo biyo-xidheenada ay qorshaysteen sanadkan ee fulintoodii lagu jiro oo ah buu yidhi raisal wasaare kuxigeenku, ‘‘mid aan indhahanaga kusoo aragnay.’’
Waxaa kale oo uu raisal wasaare kuxigeenku kunuux-nuuxsaday in deegaanka soomaalida laga baran karo:
Inay si han-wayn wax u qorshaystaan wakhti gaaban oo ay kudhiiradaan fulinta qorshahooda mudo kooban gudaheed islamarkaana ay natiijo buuxda oo lataaban karo kakeenaan
Mudane Dhamaqe Mokenin ayaa amaanay nidaamka ay xukuumada deegaanku uwajahday biyaha iyo qaababkay uhirgalisay fulintooda oo ay kadanbaysay aas aasida shirkadaha kaladuwan ee ay kamidka yihiin: shirkada dhismaha hawlaha biyaha, shirkada qodida ceelasha, shirkada jidadka iyo shirkada booliska oo dhamaantood fuliyey mashaariico waa wayn khaasatan shirkada dhismaha, iibka iyo adeegyada gaarka ah ee booliska oo lagu xasuusto fulintii mashruuca buundada waangay iyo waliba quarantineka xoolaha oo ay kala wareegtay shirkad mudo waday kadibna mudo 6 bilood ah kusoo gabagabaysay .
Waxaan iyana waxqabadkan kamaqnayn oo amaan mudan ayuu yidhi kuxigeenka raisal wasaaruhu, ‘‘ ciidanka booliska gaarka ah oo kadib markay nabadgelyadii meel saareen uguntaday dhanka horumarka iyagoo suuragaliyay towerada telefanada deegaanka iyagoo lakaashanaya shirkada isgaadhsiinta dalka oo waliba meel-mariyey dhanka isugudubka dhismaha jidadka.
Sidoo kale, wuxuu RW kuxigeenka uriyaaqay isbadalka uu deegaanku kakeenay dhanka waxbarashada oo 4ta milyan iyo 40ka kun ee buug ee ladaabacay ay daboolayso saamiyadii nidaamka baris-barasho sida: saamiga ardayga iyo buuga, saamiga macalinka iyo ardayga IWM. Waxaa intaa dheer, oo uu aad u amaanay mudane dhamaqe guulaha deegaanka soomaalidu kasoo hoyiyey dhanka caafimaadka gaar ahaan kooxda wareegta ee qaliinka indhaha. Arintan oo runtii noqotay mid ay guriga iyo raisal wasaare kuxigeenkuba si wayn u ladhaceen, iyo waliba iskudaygii waynaa ee ay xukuumadu deegaanku kasamaysay kajawaabida abaarta ay saamaynta cimiladu keentay. Wuxuuna hadalkiisii kusoo xidhay isagoo amaanay shacabka deegaanka oo leh dabeecad horumarineed iyo xukuumada deegaanka oo iskaashaday inay guulahani kuyimaadeen sidaa darteed in deegaanka soomaalidu yahay deegaan kudayasho mudan oo ay deegaanada kale waxkabartaan.
Dhanka kalana, wasiirka wasaarada arimaha federalka iyo horumarinta reer miyiga mudane Kassa Tekleberhan ayaa usheegay deegaanada kale inay si ficil ah utagaan deegaanka soomaalida si ay wax uga soo bartaan dhinacyada kaladuwan ee waxqabadka horumarka iyo waliba systemka dhamaystiran ee ay ilaa heer tuulo xukuumadu soomaalidu abuurtay oo ah runtii kuwo kudayasho mudan.
Waxaa intaa dheer, Ergooyinka kililada oo tixraacaya su’aasha iyo jawaabta uu israaciyey raisal wasaare kuxigeenka ayaa codsaday in laqoro taariikhda isbadalka horumarineed ee uu deegaanka soomaalidu mudo gaaban kusoo hoyiyey guulaha laxaadka leh iyagoo dhamaantood kamarag kacay.
Ugudanbayna, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in imaanshaha deegaanka canfarta uu waxtar iyo khibrad kalaqaadasho badan leeyahay gaar ahaan warshada sonkorta. Wuxuuna u mahadceliyay madaxwaynaha deegaanka canfarta mudane siyum awal oo mudadii gaabnayd ee uu xilka qabtay dadaal badan muujiyey. Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa intaa raaiyey in isbadalka horumarineed ee deegaanku uu ugu horayn ilaahay keenay, marka xigana uu kuyimid xukuumada deegaanka, shacabka iyo dawlada federaalka ah oo iskaashaday. Wuxuuna kubooriyey boardga in taageerada gaarka ah ee horumarka ee ay xukuumada dhexe siiso deegaanadan lasii xoojiyo.